हजुर यहाँ कोठा खाली छ कि!
डा. रविन खड्का print
एकाबिहानै लगातार बजेको डोरबेलले डा.बस्नेतको एकाग्रता भंग हुन्छ। टाढै भए पनि बेडरूमबाटै हेर्न मिल्ने गरी बनाइएको मेनगेटमा चिहाउँन पुग्छन्। ‘हजुर यहाँ कोठा खाली छ कि’ गाउँबाट भर्खरै आएको विद्यार्थी जस्तो देखिने एक युवकले तलैबाट बोलेको आवाज अष्पस्ट भए पनि उनले बुझ्छन्।
नवनिर्मित आफ्नो बंगलाको एउटा कोठा मात्र भाडामा दिँदा त्यहाँ निस्कने स्टोभको आवाज र कालो धुँवा, अनि जताकतै ठोकिने किलाकाटाले बिग्रने स्वरूप, दैनिक जसो बिराएर गाउँबाट आउने पाहुनाको ताती र बाथरूम तथा गार्डेनमा हुने फोहोर कल्पेर उनले आफ्नो घरको फ्ल्याट मात्र भाडामा दिने गरेको र त्यो पनि अलि पछि मात्र खाली हुने कुरा बताउँछन्। उक्त युवक केही नबोली फर्कन्छ।
मेहनत गरी पढेर ठूलो मान्छे भएपछि आफू जस्तै दुःखमा परेका विद्यार्थीका लागि धेरै कोठा भएको एउटा ठूलो घर बनाउँछु र सहज पढ्ने वातावरण बनाइ सस्तो मूल्यमा भाडामा दिनेछु।
‘मालिक चिया’, कान्छाको आवाजले उनी झसङ्ग भइ एकाएक वर्तमानमा फर्कन्छन्। चिया टेबलमा राख्ने इशारा गर्दै उनी त्यही कान्छाको मुहारमा दुई दशक अगाडिको आफ्नो दाइको छायाँ देख्न पुग्छन्, जो आफ्नो रोगी बुवालाई उपचार गर्दा लागेको ऋण तिर्न नसकी त्यसै गरी बडाबा कहाँ बसेर काम गर्ने गर्थे।
उनी अहिले आलिसान महलका मालिक भएका छन्। आधुनिक बिलासिताका सामानको उनीसँग कुनै कमि छैन। शहरका नाम चलेका केही अस्पतालहरुका लाखौंका शेयर उनको नाममा छ। कान्छाको मुहारमा देखिएका उनका दाइ पनि जग्गा र मानिस दलाली गरेर उनी भन्दा अझ सम्पन्नताको जीवन बाचिरहेका छन्।
टोलाइहेका उनको ध्यान, लुटपुटिदै आफूतिर आउँदै गरेको महंगो र प्रिय कुकुर लुसीले खिच्न पुग्छ, जसको लागि उनले एउटा छुट्टै कोठा छुटाएका छन् र त्यस्ता झण्डै दुई तीन जना विद्यार्थीलाई धान्ने बराबरको खर्च उसको लागि खर्चिन्छन्।
सम्झनाका तरेलीका बीच टेबलमा राखिएको चिया पिउन खोज्छन्। चिया तातै हुन्छ तर उनको मन त्यो भन्दा धेरै तातो र उकुसमुकुस वातावरणमा डुबुल्की मार्दै तैरैदै गरिरहेको हुन्छ।
‘ब्रेकफास्ट तयार छ, लिन आईस्यो हजुर’, श्रीमतिको आवाजले अझै बेचैनी थपिदिन्छ। बिहे गर्नुपूर्व र अहिले अवस्थामा ससुराली पक्षले गर्ने व्यवहारमा आएको अन्तर सम्झन्छन्। होइन यी कुसम्झनाहरू पनि विपत्ति झै एकैपटक किन आएका होलान् ? बारम्बारको बोलावट पछि पनि केही जोर नचलेपछि बर्बराउदै श्रीमति उनकै सामुन्ने भएपछि संग्लो तन्द्रामा आइपुग्छन्। ‘किन आज हजुरलाई सन्चो छैन कि क्या हो, मुहार पनि मलिन देख्छु त?’ श्रीमतिको प्रश्न पाखा लगाउँदै उनी आफ्नो स्मार्टवाच हेर्छन्, आठ बजिसकेको हुन्छ। आफ्ना मंहगा मोवाइल हेर्छन्, क्लिनिक तथा अस्पतालबाट दर्जनौ मिस्डकल र मेसेजहरू।
सधै हतारमा देखिने उनलाई आज किन किन क्लिनिक जाने जाँगर चल्दैन। नौ नारी गलेर आएको भान हुन्छ ।
‘बाबा बाबा’ भन्दै दौडदै नजिकै पुगेकी छोरीको आवाजले उनको मुहारको अलिकति परिवर्तन गरिदिन्छ। छोरीलाई काखमा लिँदै अनायासै उनको मनमा बाध्यात्मक र बिरोधाभासयुक्त विचार उत्पन्न हुन्छ। उनी सोच्छन्, संसारको नियम नै यस्तै छ, जो कुमालेको चक्र झै घुमिरहेको छ। दुःखसुख भनेका जिन्दगीका अवयव नै हुन्। अनि दुःख नगरी सुख कहाँ पाइन्छ र? अहिले त्यो विद्यार्थीले दुःख नगरे उसको भविष्य कसरी उज्वल हुन्छ?, आदि इत्यादी कुरा मनमा खेलाउँदै उनी आफ्नो विगतलाई वर्तमानले ढाकछोप गर्छन्। श्रीमतिलाई लन्च प्याक तयार गर्न लगाउँदै हतार हतार तयार भई क्लिनिक जान आफ्नो महंगो कारमा पस्छन्। मेनगेट खुल्छ। कार विस्तारै बाहिर निस्कन्छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण २१, २०७३ १०:४४:३८